द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | मई 30, 2020 | विदेशी भाषा
उपयोगी चिनियाँ सिक्नुको अर्थ के हो? जब म उपयोगी चिनियाँ भन्छु, मेरो मतलब - वाक्यांश र शब्दहरू हुनुपर्दछ। एक जो तपाईंलाई चिनियाँमा जान अनुमति दिन्छ। त्यस पछि तपाईले केहि पनि रोक्दैन। चिनियाँ सुलेख सिक्न सुरु गर्न। पिनयिनको sy०० सिलेबल्सको साथ जारी राख्नुहोस्। तर यदि तपाइँको लक्ष्य एक ग्राहक संग केहि शब्दहरु साटासाट गर्न सक्षम हुनु हो। किन उहाँ कफीको लागि आमन्त्रित गर्नुहुन्न यदि उहाँ फ्रान्स भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यी सर्तहरूमा समय खेर फाल्नुहोस्। अडियो विसर्जनमा सबै फोकस गर्नुहोस्। यो एक मात्र विधि हो जुन तपाईंलाई धेरै छोटो अवधिमा विश्वसनीय बनाउन अनुमति दिनेछ। तपाईं आफैंले प्राप्त परिणामहरू देखेर चकित हुनुहुनेछ। त्यसैले म तपाईंलाई आफ्नो साथीहरूको प्रतिक्रिया कल्पना गर्न दिन्छौं।
चिनियाँ सिक्नुहोस्, असम्भव?
हुदै हैन। सबै नियमहरू तपाईलाई थाँहा हुन्छ र याद गर्न यो गाह्रो लाग्छ। क्रियाको संयोजन र उनीहरूको फरक declension जस्तै। वा लि gender्ग र संख्या सम्झौताहरू। यी सबै चीनियाँमा अवस्थित छैन। एक पटक तपाईले कुनै शव्दको रूपमा प्रभुत्व पाउनुभयो। आफैलाई सोध्नु पर्ने तपाईसँग कुनै प्रश्न छैन। यसको आकार सँधै समान रहनेछ। नियममा कुनै अपवाद छैन। तर पाठ्यक्रम यी सबै जटिलता बिना एक भाषा। यो सहि हुन पनि राम्रो छ। त्यसोभए चिनियाँ पज्जल कहाँ छ? म २०% उच्चारणमा र %०% लिखित रुपमा भन्ने गर्छु।
चिनियाँ लेखनको विशिष्टता
उच्चारणको लागि। तपाईंसँग राम्रो बीस ध्वनिहरू छन् जुन फ्रेन्चमा अवस्थित छैन। तर समस्या धेरै छिटो समाधान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ पढ्न र लेख्न को लागी। हामी सामान्य बोल्छौं, र यो कुनै पनि भाषाको आधारभूतहरूको अध्ययनमा। १००० सब भन्दा सामान्य शब्दहरू याद गरीरहेको छ। यसको अर्थ चिनियाँ भाषामा छ। याद राख्नुहोस् र यसको प्रत्येक अक्षर कोर्न को लागी सिक्नुहोस्। दुई वा तीन बर्ष पछि पनि यो असामान्य हुँदैन। केहि परिणाम छैन। त्यसैले म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु यदि तपाईंसँग यी सबैको लागि समय छैन भने। लेखको तल भिडियोमा सिधा जानुहोस्। त्यसो भए फ्रान्सेली भाषामा उपशीर्षक चिनियाँ श्रृंखला जारी राख्न। जब तपाईं सन्तुष्ट मौखिक तहमा पुग्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईले बाँकीको हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ।
रिड निःशुल्क र द्रुतको लागि रूसी सिक्नुहोस्
चिनियाँ भाषा सिक्न निःशुल्क स्रोतहरू
आफूलाई दोहोर्‍याउने जोखिममा। व्यावसायिक दुनिया मा, एक कलिग्राफर को रूप मा तपाईंको प्रतिभा शायद कसैलाई चासो छैन। पहिले, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग पर्याप्त मौखिक सामान छ। तपाईं समय-उपभोगी शिक्षामा डुब्नु अघि। तपाइँलाई त्यसो गर्न मद्दत गर्न यहाँ नि: शुल्क संसाधनहरू छन्।
त्यहाँ तपाइँसँग दुई नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाइँलाई खेल र पुनरावृत्ति मार्फत चिनियाँ शब्दावली मिलान गर्न अनुमति दिनेछ।
यो साइट मन्दारिन चिनियाँ भाषा सिक्नको लागि साइटको उत्कृष्टता हो। सबै स्रोतहरू, सूचना र उपकरणहरू छन्। यो एक धेरै प्रख्यात प्लेटफर्म हो। नि: शुल्क गुणस्तरीय सामग्रीको लागि लगभग आवश्यक मार्ग।
9000 चिनियाँ पात्रहरूको सूची तिनीहरूको उच्चारणसँग। साथै सन्दर्भमा धेरै उदाहरणहरू। (ENGLISH)
चिनियाँ भाषा सिक्न सजिलो छ!
चिनियाँ भाषा सिक्ने सबै पक्षमा short ० भन्दा बढी छोटो भिडियोहरू। व्याकरण, उच्चारण र शब्दावली।
एक एशियाई भाषा उत्साहीको YouTube च्यानल। सामग्री मुख्यतया चिनियाँमा केन्द्रित छ। तर त्यहाँ जापानी पनि छ। करीव ,30०,००० सदस्यहरूले यी भिडियोहरू पालना गर्छन्। भन्नको लागि पर्याप्त छ कि तिनीहरू कुनै पनि शुरुआतको लागि धेरै रोचक छन्।
YOYO - चिनियाँ श्रृंखला को चयन
पेशेवर क्याप्शनको साथ सयौं र सयौं घण्टा भिडियोहरू। चीनमा दैनिक विसर्जनको लागि यात्रा बिना नै।
चिनियाँ उपयोगी जान्नुहोस् - अल्ट्रा कुशल र नि: शुल्क विधि मई 30th, 2020Tranquillus
अघिल्लोएक्सेलमा ड्यासबोर्डहरू, त्रुटिहरूको जोखिमविना सिक्दै।
निम्ननिःशुल्क र द्रुतको लागि रूसी सिक्नुहोस्